प्रधानमन्त्री ओलीवि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने सं’कटकाल लाग्छ : डा. केसी (भिडिओसहित) – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तर्वार्ताप्रधानमन्त्री ओलीवि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने सं’कटकाल लाग्छ : डा. केसी (भिडिओसहित)
प्रधानमन्त्री ओलीवि’रुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने सं’कटकाल लाग्छ : डा. केसी (भिडिओसहित)
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए मुलुकमा सं’कटकाल लाग्ने टिप्पणी गरेका छन् । डा. केसीले नेकपा (एमाले) फुटिहाल्ने नै नदेखिएको पनि टिप्पणी गरेका छन् । उनले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसहित उनी पक्षधर नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीसामू लाचार भएको पनि बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली माधव नेपाल र भीम रावललाई कारबाही गर्ने तहमा नजाने पनि केसीको भनाई छ । उनले माधव नेपाललाई का’रबाही गरेर पार्टीबाट निश्काषन गर्न नसक्ने पनि ठो’कुवा गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले का’रबाही गर्नको लागि त केही क्रे’ज हुनुपर्यो नि भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
बरु, का’रबाही गर्नसक्ने पार्टीमा ल्या’कत र क्’रेज नेकपा (मा’ओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा दे’खिएको सु’नाएका छन् । केसीले प्रधानमन्त्री ओली ए’क्सन ओ’रिएण्टेड लि’डर नभएको पनि जि’किर गरे ।भिडिओ